Nhau - Nemoyo Mumwe uye Rimwe Simba rekuvaka Aosheng's Brilliant All Together
Mushure mehafu ye2020 gore, nguva yakaoma, Aosheng akawana budiriro yakanaka. Auto Paint Masking Firimu, Pre-yakanamirwa Masking Firimu, Inoraswa Auto Kuchenesa Kits, Kuvaka Firimu, Kudonha Sheet / Kudonhedza Cloth, Pe Plastiki Kurongedza Bhegi, Pepa Yakafanana Masking Firimu, 3 mu1 Yakagadzirwa Masking Firimu, Ruoko Rwakabvarura Firimu. uye zvimwewo zvigadzirwa zvine hukama zviri kutengesa zvakanyanya, kunyanya Disposable Auto Cleaning Kits (Disposable Seat Cover, Disposable steering cover, Disposable foot mat, Disposable gear shift cover uye Disposable hand brake cover). Kutenda kune vese vashandi vakashanda nesimba panguva ino. Zvakare, Autumn iri kuuya, kambani yakafunga kupa vashandi zororo.
Qingdao Aosheng Plastic kambani yakaronga vese vashandi kuti vave nezuva rimwe rematsutso kuenda kuLin Yi Guta munaGunyana 4th . Lin YI, iyo ingori maawa matatu chete kufekitori yedu, inozivikanwa inozivikanwa tsvuku yekushanya yakavakirwa guta. Iyo yakanaka kwazvo uye inopa akawanda echiChinese echinyakare tsika. Panguva yechiitiko ichi, munhu wese aiita zvakarongeka, aichengetana, ane kubatana, akavaka hushamwari, uye akaedza zvakaoma kuchengetedza kukudzwa kwechikwata chedu. Pasi pemhepo yekubatana, kudyidzana, uye hushamwari, iyo inofarira mhuri hombe, Tinonzwa mweya wechikwata nekubatana kwedu kuve kwakadzikiswa nekusimbiswa. Panguva ino, isu tinonzwawo kukwidziridzwa uye kukura kunounzwa needu bhizinesi. Tese tine zuva rinofadza kwazvo.
Kugovera iyo nguva, tichitarisira ramangwana, isu tinotenda kuti vese vashandi veAosheng vaizovaka kugona kwaAosheng pamwechete nemoyo mumwe uye nesimba rimwe. Aosheng haisi chete kambani kana fekitori yekutengesa chigadzirwa. Isu tinotarisa kuvaka yakakura kambani tsika nemweya wekambani. Wese munhu mukambani anonzwa kuti ini pachangu ndiri chikamu chemhuri hombe uye isu tinofanirwa kuzviita zvirinani uye nekuwedzera kusimba. Tinokutambira nemoyo wese kuva mumwe wemhuri yedu.